Tababaraha Liverpool Klopp uu ku qamaari doona Mane – Muxuuse ka yiri Kulanka Chelsea ee habeen danbe? | Laacibiin.net
Home » Horyaalada » Premier League » Tababaraha Liverpool Klopp uu ku qamaari doona Mane – Muxuuse ka yiri Kulanka Chelsea ee habeen danbe?
Tababaraha Liverpool Klopp uu ku qamaari doona Mane – Muxuuse ka yiri Kulanka Chelsea ee habeen danbe?	Macalin Jurgen Klopp ayaa go’aansan doona inuu Sadio Mane kusoo bilowdo kulanka ay habeen danbe la ciyaarayaan naadiga hogaanka haysa ee Chelsea.
Liverpool ayaa diyaarad qaas ah udirtay xidigan oo kasoo laabtay waajibaadkiisa Senegal, kadib markii uu si niyad jab leh uga soo haray Africa Cup of Nations, ciyaaryahankan ayaana rigooradii qarankiisa loooga badiyay qasaariyay.
Laakiin tababaraha kooxda Funaanada gaduudan ee Klopp ayaa shaaciyay in dhibaato xoogan ay ka haysatay garbaha ayna ubaahan yihiin inuu kulankaas safto.
“Waan la hadlay isaga, wax walba waa ay wanaagsan yihiin ilaa haatan, dabcan kooxda wuu la joogi doonaa beri subax, markaas ayaana go’aan ka gaari doonaa, waxaan fiirinayaa indhihiisa si aan ugaarno go’aanka ugu macquulsan,” Klopp ayaa sidaas sheegay.
Sidoo kale Klopp ayaa ogsoon in guuldaro kasoo gaarta Chelsea ay soo gaba gabeyn doonto hankooda horyaalka, laakiin qorshahooda uu yahay iney sameeyaan si lamid ah sidii ay Chelsea ugu sameeyeen Stamford Bridge.
“Waxba kama dhihi karo booska Chelsea iyo arimaha kale, waxba kama sameyn karno arintaas, laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan guuleysano,” ayuu yiri Klopp.
Isagoo sii hadlaya ayuu Klopp yiri “Sida runta ah boos wanaagsan ayay ku jirtaa, xili fiican ayayna dhex mushaaxayaan taas ayaana arimaha qaar ufududeyneysa, laakiin ma ahan wax walba.
“Dad badan ayaa ku fakaraya In Liverpool ay xiligan ku adag tahay iney celiso Chelsea, waana ay adag tahay, laakiin ma ahan sidaas mid macquul ah”ayuu yiri Klopp
Liverpool ayaa dib uheli doonta Adam Lallana oo nasasho ku maqnaa kulankii Southampton, tababaraha ayaana sameyn doona ku dhawaad 9 badal kadib labo guuldaro oo udanbeysay.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/tababaraha-liverpool-klopp-uu-ku-qamaari-doona-mane-muxuuse-ka-yiri-kulanka-chelsea-ee-habeen-danbe/">Tababaraha Liverpool Klopp uu ku qamaari doona Mane – Muxuuse ka yiri Kulanka Chelsea ee habeen danbe?</a>